सर्वश्रेष्ठ बेक्ड गेडाहरू (चुलो माथि वा ढिलो कुकर) - व्यंजनहरु
पीठो टर्टललाको साथ फ्राइड एप्पल पाईहरू
एक उत्तम बुरिटो कसरी फोल्डरमा राख्ने
कसरी एक क्लब स्यान्डविच खाने
मक फ्लेक्स र चकलेट संग कुनै बेक कुकीज छैन
सर्वश्रेष्ठ बेक्ड गेडाहरू
यो उत्तम हो पकाइएको गेडाहरू पकाउने विधि उत्तम भाँडो भाग्य साइड डिश, यति धेरै स्वादको साथ। यी बेक्ड गेडाहरू बेकन, प्याज, र काली मिर्चले भरिएको हुन्छ र स्वादको पूर्ण गहिराइको साथ मिठो र स्वादिष्ट सास प्रदान गर्दछ।
कसरी फ्रिजन्डे हरियो सिमी बनाउने
बेक्ड गेडाहरू क्लासिक हो अतिरिक्त खाना केहि को लागी भुटेको कुखुरा , त्यो बनाउन सजिलो छ, केहि केही साधारण सामग्रीहरू आवश्यक छन्, र प्रत्येक एक पटक उत्तम हुन्छ। तिनीहरूले यस साइड डिश भन्दा सजिलो छैन!
जब बार्बेक्यु मनपर्ने मनपर्दो बनाउने ग्रिल गरिएको कुखुराको स्तन , ग्रील्ड BBQ चिकन वा तपाईंको मुखमा पग्लनुहोस् तत्काल भाँडा रिबहरू यो बेक्दा सिमी नुस्खा र एक पक्ष कोलेजो । यी सबै भन्दा राम्रोको सर्वश्रेष्ठ हो।
म वर्षहरु को लागी यी पकाएको सिमी बनाउँदैछु। तिनीहरू हाम्रो मनपर्ने छन्, र राम्रो कुरा के तिनीहरू हरेक एक पटक बाहिर बारी छ। कहिलेकाँही मँ दुई वा दुई छाँटकाँट गर्दछु, जस्तै यदि म गुड बाहिर छ भने, मँ यसलाई बाहिर छोडिदिन्छु। तर जे भए पनि हामी भाँडो भाग्य, पार्टी, वा गर्मी BBQ हामी लिन्छौं, यी हाम्रो पक्ष हुन्।
पकाइएको बीन्स कसरी बनाउने
यी बेक्ड सिमीहरू स्क्र्याचबाट १००% हुँदैन, किनकि तपाईं क्यान्ड गेडाहरूसँग शुरू गर्नुहुन्छ जुन सासमा पहिले नै छ। मलाई लाग्छ कि तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि तिनीहरू क्यान गेड प्रयोग गरेर बिरूवाबाट बेक गरिएको छ! स्क्र्याचबाट होममेड बेक्ड गेडाहरू बनाउन, नेभी सिमीहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन एक चटनीमा छैन, र Table चम्मच टमाटर सॉस पकाउने विधिमा।
बेक्ड गेडाहरू के बनेको छ? यहाँ छ कि कसरी यी अर्ध घर बनाइएको पकाउने गेडाहरू:
बेकन: आदर्श बेक्ड गेडाहरू बनाउनको लागि पहिलो चरण नुन स्मोकी स्वादको लागि बेकन हो। पछिबाट सिमा माथि माथि राख्न केही बेकन रिजर्व गर्नुहोस्।
सिमी : पोर्क र बीन्स वा बुसको बेक्ड गेडाहरूको सम्पूर्ण क्यान प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई निकासी नगर्नुहोस्। खैरो चिनी, गुड़, र अन्य अवस्थित अवस्थित सासमा थपेमा यसलाई बढाउनेछ।
प्याज र खुर्सानी : थोरै बेकन ग्रीस रिजर्भ गर्नुहोस्, र यसमा प्याज र खुर्सानी पकाउनुहोस् तपाईंको थालमा थप स्वाद थप्न।
पकाइएको बीन्स कसरी पकाउने
जब म चीजहरू बेक गर्न सक्षम भइरहेको छु ... जस्तो यी उत्कृष्ट पकाएको कुखुराको पखेटा मलाई खाना पकाउनको लागि अन्य विकल्पहरू पनि मनपर्छ। पखेटा को मामला मा म ग्रिल वा हावा त्राइ , तर यी बीन्सको मामलामा ... यसलाईaमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ढिलो कुकर विधि ।
फ्रिज पिच रेसिपीको साथ बियाली पाई
क्रक पॉट बेड गेडाहरू
यी ब्राउन शुगर बेक्ड गेडाहरू क्रोकको भाँडो बनाउनको लागि, विधिमा सबै चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई क्यासरोल थालमा बेक गर्नुको साटो, तिनीहरूलाई ढिलो कुकरमा राख्नुहोस् र on-8 घण्टासम्म कममा पकाउनुहोस्, वा उच्चको लागि। -5-। घण्टा।
प्रत्येक क्रोकको भाँडो अलिक फरक हुन्छ, त्यसैले ans- hours घण्टादेखि सिमीमा नजर राख्नुहोस् ताकि तिनीहरू जलाउन सक्दैनन्।
स्टोभ शीर्ष पकाइएको बीन्स
स्टोभ टुप्पोमा पकाइएको सिमी पकाउनको लागि, नुस्खामा सबै चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्, केवल कचौरामा बीन्स संयोजन गर्नुको सट्टा, स्टोभमा डच भट्टीमा थप्नुहोस्। त्यसोभए कम तापमा कति घण्टा सम्म तनाव गर्नुहोस् जबसम्म उनीहरू आवाश्यक स्थिरतामा पुग्दैन।
यी तपाईंको अर्को लन्चियन वा पोटलकमा ल्याउनुहोस्, र तपाईं पार्टीको हिट हुनुहुनेछ!
अन्य पटलक मनपर्नेहरू:
सर्वश्रेष्ठ आलु सलाद रेसिपी - अगाडी बनाउन को लागी महान
सर्वश्रेष्ठ कोलेजो - सजिलो मनपर्ने
स्पेगेटी सलाद - स्वस्थ Veggies भरिएको
काकडी प्याज सलाद - ताजा र बनाउन सजिलो
इटालियन पास्ता सलाद - पाठक मनपर्ने!
तयारी समयपन्ध्र मिनेट कुक समय। घण्टा पन्ध्र मिनेट कुल समय। घण्टा ० मिनेट सर्भिंगहरू१ सर्विंग्स लेखकराहेलक्लासिक बेक्ड गेडाहरू, एक कासरोलमा पकाइएको, प्याज, खुर्सानी, र बेकन संग स्टड। प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ रातो प्याज राम्ररी पासा
▢½ कप हरियो घाउ मिर्च राम्ररी पासा
▢१ पाउन्ड बेकन खस्ता र पाकेको खाना पकाउनुहोस्
▢½ कप केचअप
▢¼ कप गुड़
▢⅔ कप ब्राउन सुगर
▢दुई चम्मच साइडर सिरका
▢१ चम्चा वोर्स्टरशायर सॉस
▢दुई चम्मच सुख्खा रायो
▢० औन्स उसिनेको सिमि वा सुंगुर र बीन्स
▢दुई चम्मच हरियो प्याज
▢दुई चम्मच काटिएको बेकन (पकाइएको बेकनबाट आरक्षित)
रातो प्याज र मरिचलाई सानो टुक्रामा पकाउनुहोस्। छुट्याइएको।
यो क्रिस्पी नभएसम्म बेकन पकाउनुहोस्, कागजको तौलियामा निकाल्नुहोस्। केही बेकन ग्रीस रिजर्व गर्नुहोस्।
राम्रोसँग बेकन पासा। गार्निशका लागि २ चम्मच राख्नुहोस्। छुट्याइएको।
Preheat ओभन 350 350० ° F मा, र्याक तल्लो-मध्य स्थितिमा सेट गर्नुहोस्।
एक skillet मा, गर्मी आरक्षित मध्यम बेच्न मा बेकन ग्रीस।
पासेदार रातो प्याज र हरियो मिर्च जोड्नुहोस्, नरम नभएसम्म साटा।
ठूलो आकारको कचौरामा, केचअप, गुड, खैरो चिनी, साइडर सिरका, वोर्सेस्टरशास सस, र सुख्खा रायोको मिश्रण, र एकसाथ ह्वास्क।
सिमी, प्याज, र हरियो मिर्च मा चलाउनुहोस्।
एक 9x13 'बेकिंग डिशमा राख्नुहोस्।
२ घण्टासम्म बेक गर्नुहोस्, त्यसपछि काटिएको बेकनमा चलाउनुहोस्।
अर्को घण्टा वा बढि बेक गर्नुहोस् जब सम्म सॉस पकाउँदैन, र तपाईंको इच्छित स्थिरतामा पुग्छ।
बीन्स minutes मिनेट को लागी सस गाढा राख्नका लागि खडा दिनुहोस्।
आरक्षित बेकन र हरियो प्याजको साथ गार्निश गर्नुहोस्। सेवा
क्यालोरिज:२ 6,कार्बोहाइड्रेट:38g,प्रोटिन:9g,मोटो:१g,पागलिएको बोसो:।g,कोलेस्ट्रॉल:२मिलीग्राम,सोडियम:11११मिलीग्राम,पोटासियम:4२4मिलीग्राम,फाइबर:6g,चिनी:पन्ध्रg,भिटामिन ए:75IU,भिटामिन सी:9.9मिलीग्राम,क्यालसियम:१मिलीग्राम,फलाम:२.4मिलीग्राम
कीवर्डबेक्ड गेडाहरू, सिमी कोर्सअतिरिक्त खाना पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
यो इज बेक्ड बीन्स रेसिपी गर्नुहोस्